Tag: wax soosaarka ugu horreeya | Martech Zone
Tag: wax soosaarka aasaasiga ah
Khamiis, Agoosto 18, 2016 Monday, August 22, 2016 Douglas Karr
Dunida SEO ayaa xoogaa ruxaysa warka sheegaya in Moz ay shaqaalaheeda kala bar kareyso. Waxay sheegaan inay sii laba jibaarayaan iyadoo diirada lasaaray raadinta. Waxay horyaal iyo lamaane lama huraan u yihiin warshadaha SEO sannado hadda. Aragtidayda kuma rajo weynaato warshadaha Raadinta Dabiiciga ah, mana hubo inay tahay halka ay tahay inuu Moz ka labalaabo. Halka Google uu sii wado dhisida saxnaanta iyo natiijooyinka tayada iyada oo loo marayo sirdoonka farsamada